1510nm Coaxial SM Pigtail LD လေဆာရောင်ခြည် Diode ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Coupled Lasers > Coaxial pigtailed လေဆာ diodes > 1510nm Coaxial SM Pigtail LD လေဆာရောင်ခြည်
1510nm Coaxial SM Pigtail LD လေဆာရောင်ခြည်
1510nm Coaxial SM Pigtail LD လေဆာရောင်ခြည်၊ CW / puls fiber coupled laser diode ဖိုင်ဘာမှပျမ်းမျှအားထွက်ရှိမှု ၂ မီလီမီတာမှ ၄ မီလီမီတာပို့ဆောင်ပေးသည်။ ၁၅၁၀nm Coaxial SM Pigtail LD လေဆာရောင်ခြည်စွမ်းအင်သည်ဒေတာဆက်သွယ်ရေးစနစ်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တစ်ခုတည်းသောဖိုင်ဘာဖိုင်တွဲတွင်အသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ လေဆာရောင်ခြည် diode module သည် 1510nm လှိုင်းအလျားတွင်အလွန်တည်ငြိမ်သောထုတ်လွှတ်မှုကိုသေချာစေသည့်နောက်ဘက်ရှိ photodiode ကိုစောင့်ကြည့်ရန်ထုတ်လွှတ်မှုစွမ်းအားကိုထုတ်လွှတ်သည်။
1510nm Coaxial SM Pigtail LD လေဆာ diode ၏အနှစ်ချုပ်
1510nm Coaxial SM Pigtail LD လေဆာရောင်ခြည် ၂။ နိဒါန်း
1510nm Coaxial SM Pigtail LD လေဆာရောင်ခြည်၏ 3. အင်္ဂါရပ်များ
1510nm DFB လေဆာ diode pigtailed;
2ž2mW Output ပါဝါ;
built-in PD optional ကို;
FC / APC၊ FC / PC နှင့်အတူ Single Mode Fiber pigtail;
1510nm Coaxial SM Pigtail LD လေဆာရောင်ခြည်ကိုအသုံးပြုခြင်း
1510nm Coaxial SM Pigtail LD လေဆာရောင်ခြည်၏ 5. Electro-Optical လက္ခဏာများ (T = 25â„)
အလယ်လှိုင်းအလျား အိုင်စီ PO = PF 1500 1510 1520 nm
၆။ အထုပ်ပုံနှင့် PIN-OUT အဓိပ္ပာယ် (ယူနစ် - မီလီမီတာ) ၁၅၁၀nm Coaxial SM Pigtail LD လေဆာရောင်ခြည်။
၇။ 1010nm Coaxial SM Pigtail LD လေဆာရောင်ခြည်၏သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်အမှုဆောင်ခြင်း
hot Tags:: 1510nm Coaxial SM Pigtail LD လေဆာရောင်ခြည် Diode, ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ, လက်ကားရောင်းဝယ်မှု, စက်ရုံ, စိတ်ကြိုက်, အမြောက်အများ, တရုတ်, တရုတ်နိုင်ငံ၌ထုတ်လုပ်သည်စျေးပေါ, အနိမ့်စျေး, အရည်အသွေး